INokia kunye neApple baba ngamadlelane enkosi kwisivumelwano | Ndisuka mac
INokia kunye neApple baba ngamadlelane enkosi kwisivumelwano
I-Apple ihambisa ithebhu ngezimangalo ezahlukeneyo kunye nezilingo ezivulekileyo kwihlabathi liphela. Njengo IQualcomm okanye iSamsung, I-Apple ibisoloko ikwangquzulwano oluqhubekayo nayo NokiaInkampani yaseFinland, ngoku yeyaseNyakatho Melika Microsoft. Kodwa ngoku ezi nkampani zimbini zibonakala zisombulule iyantlukwano yabo.
Zombini iApple kunye Nokia Basayine isivumelwano seminyaka emininzi kwipropathi enomgangatho ophezulu wokuqonda, ngaloo ndlela besombulula enye yeengxabano zabo eziphambili. Akufanele silibale ukuba kukho ukungavani okuvulekileyo phakathi kweenkampani zombini, kodwa esi sivumelwano simele indlela ebaluleke kakhulu eya kuthi ngokuqinisekileyo izuze amaqela omabini.
Siyazi ukuba kwiinyanga nje ezidlulileyo, igqwetha lenkampani esekwe eCupertino bebexakeke ngokwenene ngamatyala ahlukeneyo ngokuchasene neenkampani. njengaye IQualcomm kunye neSamsung, ingakumbi kumba wepatent. Esi sivumelwano kunye Nokia izisa uxolo lwengqondo kwiiofisi.
Ekupheleni konyaka ophelileyo, Nokia Ityhola iApple ngokwala uthotho lweepatent ebisenza isicelo sayo. Nangona kunjalo, iApple yayisebenzisa amalungelo awodwa omenzi wechiza ukusuka Nokia Enkosi kwisivumelwano sangaphambili. Olu lwaphulo-mthetho lwahlawuliswa, ukunika isizathu kwinkampani yaseFinland.
Ngokwesivumelwano esitsha, ukusukela ngoku ukuya phambili Nokia Iya kubonelela ngeemveliso zeziseko zophuhliso kunye neenkonzo kwiApple, yomeleza ukwandiswa kwesigebenga saseMntla Melika. Ngakolunye uhlangothi, Nokia izakufumana intengiso entsha nobanzi, kuba ezinye zeemveliso zohlobo (ezo zezomgca Withings, Inkampani efunyenwe ngaphambili) ngoku iyakuthengiswa kwiivenkile zentengiso kwihlabathi liphela.
Kwa kunjalo, Oku kuqonda kutsha phakathi kwamaqela omabini kunokunceda zombini iinkampani zisebenze kunye kumanyathelo ezempilo edijithali. Ngokutsho UMaria Varsellona, UMlawuli wezoMthetho Nokia:
“Esi sisivumelwano esibaluleke kakhulu phakathi kwethu neApple. Ngale ndlela, siphucula ubudlelwane bethu neApple, ukusuka ekubeni ngabachasi kwiinkundla nakwiimarike ezinqabileyo, ukuya kuthi oosomashishini abasebenzela ukunceda abathengi bethu. »
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » INokia kunye neApple baba ngamadlelane enkosi kwisivumelwano
I-Netherlands sele inandipha ulwazi lwezothutho lukawonkewonke kwiiMephu zika-Apple
Imitya emitsha yeNikeLab yeApple Watch ngokudibeneyo neNike Air VaporMax Flyknit